John Wayne: Chii chakaitika kuna Revolver wake, holster rig, yeLife Magazine ya1972?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » John Wayne: Chii chakaitika kuna Revolver wake, holster rig, yeLife Magazine ya1972?
Entertainment • mafirimu • Investments • nhau • vanhu • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Revolver yaive naJohn Wayne uye yaishandiswa neWest star mumafirimu akati wandei nguva pfupi yadarika yakatengeswa nemadhora mazana mashanu nemakumi mashanu ane mazana mashanu paRock Island Auction Company (RIAC). Colt-pfuti nhanhatu pakutanga yakagamuchira fungidziro yakadzikira nekambani yefandesi, asi mushure mekumisikidza yakatarwa, kufarira kwakakura nekukurumidza pakati pevateresi.
Colt Single Action Army revolver inogona kuonekwa ichishandiswa naWayne mumafirimu akadai se Ichokwadi Grit, Jongwe Cogburn, uye Vakomana vemombe, Pakati pevamwe.
Yakasanganisirwa neavolver yaive Wayne's holster rig, akawanda akasimbisa magwaro, uye 1972 kopi ye upenyu magazini
Iyo Life Magazine yaive naWayne pabutiro akapfeka zvese rig nepfuti.
"Musika wekuunganidza wave uchiona kukura kukuru mumhando dzinoverengeka," akadaro RIAC Mutungamiri Kevin Hogan. “Kana iwe ukasanganisa maviri eaya marudzi, Hollywood memorabilia uye muteresi pfuti, zvinogona chaizvo kukoka kumwe kupisa hasha. "Tinofara zvikuru kune mutengesi wedu uye tinofara kuti vatengi vedu vanotivimba kuti tivimbise zvinhu izvi zvakanaka."
Kukura mumutengesi wemaoko emuteresi kunoenderera kuonesa huwandu hwepamusoro hwekutengesa hunoonekwa mune yekutengesa chikamu. Iyo okisheni iyo Wayne's Colt revolver yakapihwa yakawedzerwa kukarenda yeRIAC kuzadzisa kudiwa kuri kukura. Chiitiko chemazuva matatu chaive nezvidimbu zvinopfuura zviuru zvinomwe zvekuunganidza pfuti pamwe nezvigadzirwa zvemauto, zvishongedzo, hunyanzvi, uye zvakaonekwa zvinodarika mamirioni masere emadhora.
Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica: Nyika Itsva yehutano & ...
Tsvagiridzo yesainzi muArctic, Russian Style